विज्ञान कथा : सिको – MySansar
विज्ञान कथा : सिको
Posted on July 21, 2018 July 21, 2018 by mysansar
“ममी? मेरो ममीलाई के भयो?” यो बालस्वर सुनिनु र उसका आँखा खोल्नु एकै साथ भयो। उसले आफूमाथिको सिलिङ् मा टाँगिएको बत्तीको चहक सहन नसकी आँखा एक पटक आँखा बन्द गरी। अनि नाक र घाँटीको बिचभागबाट बलपूर्वक सास बाहिर फालेर मलिनो आवाज निकाली – “अहँ”। कष्टपूर्वक फेरि आँखा खोली र कौतुहलपूर्वक आँखाका नानीहरु ठुला बनाएर टाउको घुमाउँदै वरपर हेरी। ऊ वरिपरि अग्ला अग्ला दिवारहरुको बिचमा फैलिएको एउटा लाम्चो परेको कोठाको कुनामा ढेपिएको शैय्यामा थिई – एक बिरामी जस्ती लाग्दथी। शैय्यासँग जोडिएको भित्ताको माथिल्लो भागमा घुमिरहेको भेन्टिलेटरको एक तमासको आवाज र बाहिर कोरिडरमा समय-समयमा मान्छेहरु गुन् गुन् बोलेको मधुर स्वरको बिचमा एउटा अपूर्व शान्ति थियो। त्यो शान्ति भङ्ग गर्दै बालिका र एउटा सेतो कोट लगाएको चालीस-पचास देखिने मानिस कुरा गर्दै थिए।
“तिम्रो ममीको होस गुमेको छ प्रीति!” त्यस मानिस भन्दै थियो, “तर मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तिमी र म, अनि हाम्रो समाजको वातावरणले उनीलाई फेरि पनि पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउन सक्नेछौं।”
“तर कसरी डाक्टर पान्डे?” प्रीतिले पत्यार नलागेको आवाजशैलीमा सोधी, “मेरो ममीको त दिमागमा नै असर परेको छ भनेको होइन?”
“हो छोरी हो! तर आजको यस युगमा असम्भव केही छैन। म आफैं दिमाग विशेषज्ञ हुँ र मलाई राम्ररी थाहा छ तिम्री ममीलाई के भएको छ।” डाक्टर पान्डेले अर्को पट्टि भित्तामा राखेको मनिटरतिर लेजर पोइन्टरले देखाउँदै भन्यो, “प्रतिभालाई चोट परेको यस भाग हो। र, त्यो भाग म सजिलैसँग मानवनिर्मित रसायन हालेर फेरिदिन सक्छु। तर यहीं तिम्रो ममीको अहिलेसम्मको जीवनी किताब झैं लेखिएर बसेका छन्, र मलाई अफसोच छ कि तिम्रो ममीले पहिलेका कुरा सम्झिन सक्दिनन्। तर जीवन भनेको बिगतको स्मृतिमा बाँच्ने हैन, आउँदो सुमधुर भविष्यको लागि बाँच्ने हो। र प्रीति, मलाई विश्वास छ तिमीले नयाँ नयाँ सपना देखाएर, जीवनको रहस्य बुझाएर प्रतिभालाई यस जीवनको सार्थकता बुझाउनेछौ।”
प्रीति मुक रही, उसले यी सबै बुझ्नु सम्भव थिएन। ऊ भावरहित अनुहारले मनिटरमा दृष्यांकित दिमाग एकोहोरो हेर्दै निकै बेर टोलाइरही। डाक्टर पान्डेले केही बोल्नु उचित ठानेन, ऊ आफू अगाडिको कम्प्यटरतिर हेर्दै नोटबुकमा केही मेमो लेख्न थाल्यो।
“ममी! ममी!! तपाईंले हाम्रो प्रमिस् कुनै पनि नसम्झिने? मलाई अर्को जन्मदिनमा मिक्की माउस भएको निलो टिसर्ट किनिदिने भनेको हैन? तर मैले मिक्की माउसको निलो टिसर्ट लाउन नपाउने भएँ।”
“निलो हैन नानू! रातो। तिमीलाई रातो सुहाउँछ।” पान्डेले प्रीतिको आँखाबाट बरर झरिरहेका आँसुका ठुला ठुला थोपा पुछिदिंदै भन्यो, “तिमीलाई मिक्की भएको रातो टिसर्ट किनिदिने। त्यो पनि तिम्रै ममीले किनिदिने। म तिम्रो ममीलाई तिमीसँग मिकीको टिसर्ट किन्ने भनेर गरेको प्रमिस् दिमागमा थपिदिउँला। जिन्दगीभरीको कहानी थप्न नसके पनि त्यति त गर्न सक्छु नि। मलाई धेरै दुख लागेको छ कि मेरै मोटरले तिमीहरुलाई धक्का दिएर यस्तो हुन पुग्यो। यो घटना मेरो जिन्दगीभरिको लागि पश्चातापको कुरा हुनेछ। र प्रायश्चित गर्नको लागि म जुनसुकै काम पनि गर्न तयार छु। त्यसैले प्रीति, मैले तिम्रो ममीको जीवनको ठुलो भाग त तोडें, तर जे जति बाँकी छ त्यसको सकेसम्म फाइदा लिनुपर्छ। र, तिमी र म मिलेर प्रतिभालाई नयाँ जीवन दिनुपर्छ।”
प्रीति केही नबोली डाक्टर पान्डेको हातमा टाउको पुरै अड्याई र मुस्काउने प्रयास गरी; मिक्कीको टिसर्ट लगाउन पाउने कल्पनाले उसलाई वास्तविकताबाट अलिकति भने पनि पर तानिदिएको थियो।
“प्रतिभा! तिमी उठ्यौ?” प्रतिभाले आफूहरुतिर हेरिरहेको देखेर डाक्टर पान्डे बोल्यो, “मलाई थाहा छ तिमी हामीलाई त के आफैंलाई पनि चिन्न सकिरहेकी छैनौ। तिम्रो नाम प्रतिभा हो। यी सानी नानी तिम्री छोरी ‘प्रीति’ हुन्। अनि म यस शिक्षण अस्पतालमा काम गर्छु र पढाउँछु पनि – डाक्टर पान्डे।”
प्रतिभाको होस खुलेको देखेर प्रीति दौडँदै गएर शैय्यामा चढी र उसको औंला खेलाउँदै गुनासो गर्न थाली – “ममी! तपाईंले त अब पहिलेको कुरा केही पनि सम्झन नसक्ने रे।”
प्रतिभा कुनै प्रतिकृया नजनाई ट्वाल्ल हेरिरही। डाक्टर पान्डे अगाडि उसलाई अर्थ्याउँदै गयो “प्रतिभा, तिमी आज दुर्घटनामा पर्यौ र त्यसको कारणले तिम्रो स्मरणशक्ति गुमेको छ। त्यसको लागि म दुखित छु। तर अब तिमीले आउँदा दिनहरुमा यो संसारको रीति रिवाज, नियम कानुन, रहन सहन सबै सुन्यबाट सुरु गर्नु पर्नेछ। मलाई पुरा विश्वास छ कि तिमी यस कुरामा सफल हुनेछौ। र, तिम्रो प्रथम गुरु हुनेछिन् तिम्रै छोरी। हो, प्रीतिले आजदेखि तिमीलाई कसरी खाना खाने, कसरी हिंडडुल गर्ने भनेर सिकाउने छिन् र तिमीले उसको सिको गर्नुपर्नेछ। शारीरिक रुपमा तिमीलाई केही पनि भएको छैन, त्यसैले तिमी आज नै डिस्चार्ज हुन सक्नेछौ। तिम्रो टाउकाको पछिल्लो भागमा दुईवटा धातूका लाइनहरु जोडिएका छन्। र, तिमीले ती लाईनहरु जोडेर बजारमा निस्केका सफ्ट्वेरहरु सिधै दिमागमा डाउन्लोड गर्न सक्छ्यौ र घरमै बसी ज्ञान पाउन सक्छ्यौ। तर मलाई अफसोच छ मैले चाहेर पनि तिम्रो बिगतको सम्झना फिर्ता ल्याइदिन सक्तिन।”
अस्पतालबाट हिंड्ने बेलामा पान्डेले प्रीतिको गाला थम्थम्याउँदै भन्यो “प्रीति, तिम्रा साथीहरु स्कूलमा पढ्दै खेल्दै गर्दा तिमीलाई चाहिं ठुलो मानिसको काम गर्नु परेको छ। तर त्यसको फलस्वरुप तिमीले अन्य भुराहरुभन्दा बेग्लै रमाइलो पाउनेछौ, चौबीसै घन्टा आफ्नो आमाको अगाडि बस्न पाउनु पनि सौभाग्यको कुरा हो।”
प्रीतिले स्वीकारोक्तिको भावमा मुन्टो हल्लाई।
प्रतिभाको सिकाइको गति डाक्टर पान्डेले सोचेको भन्दा छिटो भयो। त्यस दिन घर पुग्ने बित्तिकै प्रीतिले उसको टाउको पछाडिका दुई वटा धातुका पातोहरुसँग कम्प्युटरसँग जोडेर खाना बनाउने तरिकाको सफ्ट्वेर रोजी र ईन्स्टल गराई। भोलिपल्टदेखि प्रतिभाको मस्तिष्कमा घरका काम, किनमेल, मोटर चलाउने, भाषा पढ्न लेख्न सक्ने गराउने सफ्ट्वेयरहरु थपिए। प्रीति स्कूल गएको बेलामा प्रतिभा दिनभरि या त घाम तापेर बस्थी या कुनै नयाँ खाना बनाउन तल्लीन हुन्थी । अथवा नयाँ सफ्ट्वेर खोजेर आफ्नै मस्तिष्कमा ईन्स्टल गर्थी र यस सृष्टिको एक अर्को अदभुत पाटोको बारेमा ज्ञान लिन्थी। केही हप्तापछि नै प्रतिभा बाहिरी मानिससँग सम्पर्क गर्न सक्ने भई। ऊ छोरीलाई बेला बेलामा लाड-प्यार दिने, ओहर्याइँ गर्दा गाली गर्ने, अटेरी गर्दा रिसाउने गर्नसक्ने भई। किनमेलमा जाँदा फर्किंदा छिमेकीहरुसँग पनि भालाकुसारी गर्न थाली। छिमेकका महिलाहरु, जो उसका साथीहरु थिए, उसको पीडा बुझ्थे वा बुझे जस्तो गर्थे। उनीहरु प्रतिभालाई हेर्दै ऊबेला बिरानो शहरबाट नयाँ ठाउँमा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न आएकी मान्छे, अहिले दुखदायी दुर्घटनामा परेर कस्तो बिजोग पर्यो भनेर साहनुभूति दर्साउँथे। कोही उसको घर माइतीलाई खबर गरिदिनुपर्यो भनेर हल्ला गर्थे। कोही उसलाई मनपर्ने ठाउँहरुमा घुमाइदिने प्रस्ताव राख्थे। तर अन्त्यमा दुर्घटना अगाडिको स्मृति नभएकोले सबै मित्थ्या सम्झन्थे। र केही परेमा सहयोग गर्ने वचन दिई छुट्टिन्थे।
दुर्घटनाबाट छ महिना पुगेको दिन प्रतिभा र प्रीति पान्डेको कोठामा आए। आमाछोरीलाई ढोकामा देख्ने बित्तिकै पान्डे रोमाञ्चित हुँदै कुर्चीबाटै करायो “ओहो!!! तिमीहरु आयौ? प्रतिभा तिमी त सामान्य भइसकिछौ, तिम्रो अनुहारको चमक देखेर मैले अनुमान लगाइसकें।” प्रतिभाले मधुरो हाँसो फ्याँकी र पान्डेको अगाडिको कुर्चीमा बसी। पान्डेले प्रीतिको हात समातेर तान्यो, कपाल सुम्सुम्यायो र भन्यो “ओहो, प्रीति पनि कत्रो भइसकिछ। घरमा ममीसँग बस्न रमाइलो छ?”
प्रतिउत्तरमा प्रीतिले गाला रातो पारी, टाउको निहुर्याई र मुन्टो हल्लाई “अँ।”
“ममीले कस्तो खाना बनाउँछिन् नानु?”
पान्डेले प्रीतिको हात छोड्दै भन्यो “ल, एकछिन तिमी पल्लो कोठामा खेल्दै गर, म तिम्रो ममीलाई चेक गर्छु है?”
प्रीति ज्ञानी हुँदै बाहिर निस्की।
“प्रतिभा! तिम्रो प्रगति देखेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ। मैले बिकास गरेको कृतिम मस्तिष्क ट्रान्स्प्लान्ट पहिलो पटक तिमीमा परिक्षण गरिंदैछ। र तिमी छ महिना मै सामान्य जीवन यापन गर्न सक्ने भयौ। मेरो लागि योभन्दा खुसीको कुरा अर्को के हुन सक्छ?” केही बेरको सन्नाटा तोड्दै पान्डेले भन्यो।
प्रतिभा भावविभोर भई। डाक्टर पान्डेले उसलाई जीवन दिएको थियो। र त्यस एक्लो, सुन्य, अनि अज्ञानी जीवनमा बाँच्ने बाटो देखाइदिएको थियो, प्रीतिसँग चिनाइदिएको थियो। हुन त छोरीसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, मानिसलाई कसरी माया गर्न सकिन्छ आदि बारे ऊ अनभिज्ञ थिई, तर पनि अरुले छोरी भनिदिएको भरमा र प्रीतिले आफूलाई ममी भनेको भरमा उसले प्रीतिलाई छोरी स्वीकारेकी थिई। आखिर उसलाई एक अमूल्य साथी पनि त मिलेको थियो। रसाएका आँखालाई पान्डेको नजरबाट लुकाउने प्रयास गर्दै ऊ बोल्न लागी – “डाक्टर पान्डे! तपाईंप्रतिको यो ऋण कसरी तिर्न सकुँला!!”
“रिल्याक्स् रिल्याक्स्! बरु मैले तिम्रो पुरानो मस्तिष्कको भाग साँचिराखेको छु। र तिम्रो स्मरण फिर्ता गर्न सक्छु कि म प्रयास गर्छु।” प्रतिभाले आशै नगरेको कुरा पान्डेले बोल्यो र शैय्यामा सुत्न ईशारा गर्यो। प्रतिभा पनि आज्ञाकारी बिद्यार्थी झैं शैय्यामा उत्तानो परेर सुती। पान्डेले मांशपेसीजस्तो देखिने मासुको टुक्रो रहेको शिशीबाट दुईटा तार तान्यो र प्रतिभाको टाउकाको पछिल्लो भागका धातुमा जोड्यो। टेबलबाट रिमोट कन्ट्रोल हातमा लियो र कोठामा अरु कोही नभएको पक्का गरेपछि रिमोट कन्ट्रोलको स्वीच दबाउँदै मुसुक्क हाँस्यो।
प्रतिभाले आँखा खोली र उत्तेजित हुँदै एकै शासमा बोली “डाक्टर पान्डे? मलाई यहाँ कसले ल्यायो? त्यो गाडी चलाउने मान्छे को थियो? त्यस मानिसले मलाई जानी जानी गाडीले हान्यो पान्डे! मलाई थाहा छ। मैले उसको आँखामा मृत्युभाव देखेको थिएँ।”
“नआत्तेऊ प्रतिभा। तिमी ठिक छौ। यहाँ तिमीलाई कसैको डर छैन।” पान्डेले विचलित स्वरमा भन्यो।
“अनि, प्रीति खोई?”
“प्रीति ठिक छ। पल्लो कोठामा खेल्दैछिन्।”
“मलाई छिटो जान देऊ। मलाई अबेर भएको छ। प्रीतिको अर्को महिनाको जन्मदिनको लागि उपहार किनिदिनुछ।”
“प्रीतिको जन्मदिन गएको पाँच महिना भइसक्यो प्रतिभा!” पान्डेले बिचैमा कुरा काट्यो, “उसको लागि उपहार किनिसकियो। रातो मिक्की टिसर्ट।”
“उसो भए म छ महिनासम्म बेहोस थिएँ?” प्रतिभाले आफ्नै बोली विश्वास गर्न सकिन।
“त्यसो पनि हैन।” पान्डेले रिमोटको अर्को बटन दबायो र स्क्रिन अन गर्यो, “कुरा अलि जटिल छ। यो हेरेपछि आफैं बुझ्नेछौ।”
स्क्रिनको पर्दामा प्रतिभा देखिई – मस्तिष्क ट्रान्सप्लान्ट हुँदै गरेकी प्रतिभा, घरमा बसेर आफ्नै दिमागमा सफ्ट्वेर ईन्स्टल गरिरहेकी प्रतिभा, किनमेल गर्न लागेकी प्रतिभा, छोरीलाई खाना खुवाएर स्कूल पठाउन लागेकी प्रतिभा।
“नाइँ! पान्डे यो हुन सक्दैन। तिमीले कसरी यस्तो काम गर्न सक्यौ? एक मानवको जीवन लुटेर तिमीले आफ्नो मानवताको तिलाञ्जली दियौ।” स्क्रिनको आफ्नो तस्वीर हेर्न नसकी प्रतिभा चिच्याई।
“हैन प्रतिभा। मानवताको लागि नै म यो सब गर्दैछु। हेर, अहिले मानव सभ्यताको पराजय हुँदैछ। जताततै मानिस जोतिएका जोतियै छन्। जनसंख्या कम हुने क्रम जारी छ। त्यसमाथि, अहिले तीस वर्ष नाघेका पुरुषहरुमा साठी प्रतिशत अविवाहित छन्। किन? थाहा छ? अहिलेका मानिसहरु एक आपसमा भेट्ने समय नै पाउँदैनन्। त्यसमाथि पनि अधिकांश मानिसहरु पहिले आफ्नो चाहना पुरा होस् भन्ने चाहन्छन् – कुनै पनि कुरामा कसैसँग सम्झौता गर्न चाहँदैनन्। त्यसैले विवाह गर्ने चलन पनि हराउन लागिसक्यो। त्यसैले, प्रतिभा! मैले अब यस्तो प्रणालीको विकास गर्दैछु कि मस्तिष्कको स्मरणशक्ति भएको भागलाई फेरेर कुनै चाहना रहित, भावना रहित मानिसमा परिणत गर्न सकियोस् र प्रत्येक मानिसलाई सुहाउँदो जोडाहरु यही प्रयोगशालामै तयार गर्न सकियोस्। तिमी नै मेरो पहिलो प्रयोग हौ, प्रतिभा।”
प्रतिभा शब्दविहिन भई। पान्डे अगाडि भन्दै गयो “हेर प्रतिभा! अब म मेरो यो प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउँछु। मकहाँ लोग्ने मानिसहरु आफ्नो ईच्छा अनुसारको स्वभाव भएको महिलाको अर्डर दिन आउँनेछन्, स्वास्नी मानिसहरु आफू सुहाउँदो पुरुषको अर्डर दिन आउने छन्। अनि म क्लोन गरेका मानिसहरु, दुर्घटनामा परी मर्न लागेकाहरु र दिमागका रोगीहरुमा यो प्रणाली जडान गर्नेछु र मेरो क्लायन्टहरुको माग बमोजिमको जोडा तयार गरिदिनेछु। यसबाट मलाई पनि फाइदा त हुन्छ नै, तर मानव समाजका धेरै एक्ला मानिसहरुलाई राहत दिनसक्नेछु।”
पान्डे झन उत्तेजित भयो “तिमीले यो छ महिनामा सामान्य जीवनको बारेमा सिक्यौ र पहिलो स्टेप पास गर्यौ। दोश्रो स्टेपमा अब तिमीले पुरुषसँग प्रेम गर्न, र घर बसाउन सिक्नुपर्छ। त्यसैले भोलिदेखि तिमीकहाँ तिम्रो श्रीमानको रुपमा मेरो स्टाफलाई पठाउँदैछु। तिमीले उसले भने अनुसार उसको घरको काम हेर्न सिक्नुपर्छ, उसको चाहना अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सिक्नुपर्छ, अनि उसको सोचाइ र कामलाई सपोर्ट दिन सिक्नुपर्छ। तिमीले त्यो स्टेप पास गरेपछि म तिम्रो दिमागको स्याम्पलबाट अरु प्रतिलिपिहरु बनाउँछु र अन्य मानिसहरुमा त्यसैको आधारमा मस्तिष्क फेर्नेछु।”
प्रतिभाले यी सब विश्वास गर्न सकिन। उसलाई चिच्याउन मन लाग्यो, मस्तिष्क ट्रान्सप्लान्टको बिरोध गर्ने संसारभरिका शक्तिशाली नेताहरु र धर्मगुरुहरुका अगाडि गएर पान्डेको करतुतको पर्दाफास गर्न मन लाग्यो। तर ऊ अहिले अवाक थिई, कमजोर थिई र विवश थिई। दयनीय स्वरमा ऊ बोलौना गर्न लागी “तर पान्डे! म नै किन? मैले के बिगारेको छु तिम्रो?”
पान्डेले अट्टाहसका साथ भन्यो “मेरो लागि ब्रेनट्रान्स्प्लान्टको बिरोध गर्ने समूहको अध्यक्षभन्दा उत्तम स्याम्पल् को हुन सक्छ?”
“उसो भए पान्डे! त्यो दुर्घटना नभएर—-” प्रतिभाका ओठ काँप्न थाले।
पान्डेका शब्द झन कठोर भए “हो! मैले मान्छे खटाएर दुर्घटना पारेजस्तो गराएर तिमीलाई यहाँ ल्याउन आदेश दिएको हुँ।”
“पापी! निच!! मेरो संसार बिगारिस्। म तँलाई छोड्दिन। तैंले हामी आमाछोरीलाई यत्रो अन्याय गर्ने?” प्रतिभाको धैर्यताले सीमा छाडिसकेको थियो, पान्डेतिर मुक्की बजार्न खोज्दै कुर्लिई।
पान्डेले हतपत रिमोट कन्ट्रोलको बटन दबायो र भन्यो “प्रतिभा! धैर्य गर। होसमा आऊ।” उसले फेरि कृतिम मस्तिष्कलाई काममा ल्याइसकेको थियो; वास्तविक प्रतिभा रिमोटको एक दबाइमा विलिन भइसकेकी थिई। प्रतिभाका हात एकाएक रोकिए। उसले आफ्नो अवस्था महसुस गरी, पान्डेतिर लजाउँदै हेरी र क्षमायाचना गरी।
“केही छैन। तिम्रो स्मृति फिर्ता ल्याउन नसकिने भयो, मलाई दुख लागेको छ।” पान्डेले आफ्नो स्वर गम्भीर बनायो।
“हैन डाक्टर पान्डे। म मेरो अहिलेको जीवनदेखि खुसी छु। मलाई जीवनदान दिनुभयो; त्यसैमा म धन्य छु।” प्रतिभा नम्र हुँदै उत्तर दिई।
हलबाट प्रीति दौडिंदै भित्र आई र आत्तिंदै सोधी “ममी, के भो? किन चिच्याउनु भएको?”
“केही पनि होइन प्रीति” पान्डेले मायालु स्वरले प्रीतिको गाला मुसार्दै भन्यो “तिम्री ममी एकदम ठिक छिन्। बरु, तिमीलाई खुसीको खबर छ। भोलि तिम्रो ड्याडी तिमीकहाँ फर्कँदै हुनुहुन्छ।”
पान्डे आफ्नो कुर्चीमा फर्कियो र केही सम्झेझैं गर्दै भन्न लाग्यो “प्रतिभा! तिम्रो श्रीमानको मैले पत्ता लगाएको छु। तिमीले प्रीति जन्मे लगत्तै लोग्नेसँग पारपाचुके गरेकी रहिछौ। तिम्रो दुर्घटनाको खबर सुनेर ऊ खिन्न छ। अब जिन्दगीभर तिम्रो साथ बस्न चाहन्छु भनेर तिमीकहाँ भोलि आउँदैछ। म भन्छु, तिमी उसलाई माफ गरिदेऊ। तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ, अनि प्रीतिलाई पनि त बाबुको माया चाहिन्छ। हैन त प्रीति?”
प्रीतिले फेरि गाला रातो पारी, टाउको निहुर्याई र मुन्टो हल्लाएर स्वीकारोक्तिभावमा बोली “अँ।”
(साभार : मझेरी डट कम)